ကူးစက်ကပ်ရောဂါ ကျရောက်နေစဉ် မြန်မာနှင့် လောနိုင်ငံတို့၏ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှု သုံညရလာဒ်အပေါ် ထိုင်းသံသယရှိ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲရောဂါ ဒုတိယလှိုင်းတိုက်ဖျက်ရေး အာရှနိုင်ငံတို့ တိုးမြှင့် – H2Oupdatenews
ကူးစက်ကပ်ရောဂါ ကျရောက်နေစဉ် မြန်မာနှင့် လောနိုင်ငံတို့၏ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှု သုံညရလာဒ်အပေါ် ထိုင်းသံသယရှိ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲရောဂါ ဒုတိယလှိုင်းတိုက်ဖျက်ရေး အာရှနိုင်ငံတို့ တိုးမြှင့်
oungmarine11@outlook.com 23/03/2020	No Comments
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဒုတိယလှိုင်းအတွက် အာရှနိုင်ငံတို့၌ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိစဉ် အိန္ဒိယပြည်သူတို့အနေဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားအရေးပေါ် ဗော်လံတီယာတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတို့အား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် တနင်္ဂနွေ ညနေ ၅-နာရီမှ စတင်၍ ၅-မိနစ်ကြာ လက်ခုပ်သြဘာ ချီးမြှင့်ကြပါရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် နာရင်ဒြာမိုဒီက တိုက်တွန်းလိုက်သည်ဟု Yahoo News က ယနေ့ရေးသားသည်။
ကြောက်မက်ဖွယ် ကူးစက်ကပ်ရောဂါကျရောက်မှု ဒုတိယလှိုင်းအတွက် သြစတေးလျ-ဘွန်ဒီ ကမ်းခြေမှ အိန္ဒိယ-နယူးဒေလီလမ်းများအထိ အာရှတိုက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအသီးသီးတို့က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး အဓိကဖြစ်ပွားရာနှင့် ပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးတို့ကို တက်ကြွစွာ အားထုတ်လျှက်ရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် ရောဂါပိုးကြောင့် ဖျားနာသေဆုံးမှုကို ပထမဆုံးတွေ့ရှိရသော တရုတ်နိုင်ငံ၌ ယခုအခါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော်ရှိနေသည်။
ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ ၈၅၀၀ ကျော်ရှိသည့် တောင်ကိုရီးယားမှာ အာရှတိုက်၏ အဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခြင်းနှင့်အတူ ကူးစက်ကပ်ရောဂါဆိုး ဒုတိယလှိုင်း ရိုက်ခတ်မှု့ကို တွေ့မြင်ကြရသည်။ အာရှဒေသတစ်ခွင်လုံး၌ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူ ၉၅,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ကူးစက်မှု၏သုံးပုံတစ်ပုံဖြစ်လာသည့်အတွက် နိုင်ငံများစွာတို့တွင် ကူးလူးသွားလာမှုကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။
ယခုရက်သတ္တပတ်များ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမှာ အရေအတွက်လျှော့ကျသွားသော်လည်း အခြားနိုင်ငံများ၌မူ ကိုရိုနာရောဂါပိုး ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်သေဆုံးသူနှုန်းမှာ များပြားလာနေသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုလျှင် ၂၄-နာရီအတွင်း ကူးစက်ခံရသူ ၆၀၀ နီးပါးအထိ တတိယအကြိမ်အဖြစ်မြင့်တက်လာခြင်းမှာ အိမ်နီးချင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံများ၏ ရောဂါပိုးကူးစက်မှု သုညဖြစ်ရပ်များအပေါ် သံသယဝင်စရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသဖြင့် ဆရာဝန် ၃- ဦးနှင့်၊ အခြား ၄၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ဖြစ်ပွားမှုအများစုမှာ မြို့တော်ဂျကာတာတွင်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရက်သတ္တ၂ ပတ်ကြာ ပိတ်ပင်ထားရသည်။
ဟောင်ကောင်သည် ရောဂါကပ်ကျရောက်ခြင်း အဆိုးဆုံးအခြေအနေ ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်၌ ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးကိစ္စကဲ့သို့ အများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အချာနေရာများ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့်အခါ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်နှစ်ဆနီးပါးတိုးလျှက် ၃၁၇-ဦးဖြစ်သွားသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ ၁,၃၀၆ -ဦးတွင်မူ ထက်ဝက်ကျော် အရေအတွက်မှာ ပြီးခဲ့သည့်လ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်မစ် ဘာသာရေးစုရုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
စနေနေ့က သေဆုံးမှု ၂ ခုအပါအဝင် ပြင်ပမှ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများပြားလာပြီး ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၄၄၅ ဦးဖြစ်လာသည့် စင်္ကာပူသည် လူနေထူထပ်သည့် မြို့ပြနိုင်ငံဖြစ်သည့်အလျှောက် နိုင်ငံအတွင်း ကာလတိုဝင်ရောက်သူ အားလုံးကို တားမြစ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပြည်တွင်းနေမဟုတ်သူများကို ဝင်ရောက်ခွင့် ငြင်းဆန်ခဲ့သော သြစတေးလျှတွင်လည်း ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူ ၁,၃၀၀ ကျော်လာသဖြင့် နိုင်ငံသားများ ပြည်တွင်း ခရီးသွားလာမှုတို့ကို တားမြစ်ခဲ့ ရသည်။ တနင်္လာနေ့မှစတင်ကာ အရက်ဆိုင်များ၊ လောင်းကစားရုံများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်ဝတ်ပြုရာနေရာတို့ကို ၆-လအထိ ယာယီပိတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးရန်အတွက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။ သို့သော် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရကြောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ် ၅,၆၆၀-ဦး၊ ရောဂါကူးစက်ကြောင်း အတည်ပြုခံရသူ ၆၄၆ ဦး နှင့် သေဆုံးမှု ၃-ခု ရှိကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံ၏ ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံး ဆင်းဒ်ပြည်နယ်အား ယနေ့ ညသန်းခေါင်အချိန်မှစတင်ကာ ကူးလူးသွားလာမှုအားလုံး တားဆီးကြောင်း အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အလားတူပင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အပြင်မထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နာရင်ဒြာမိုဒီ အစိုးရက ကူးစက်ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်း စတင်စစ်ဆေးသည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် သန်းပေါင်းများစွာသော အိန္ဒိယပြည်သူများမှာ လမ်းမပေါ်၌ ပိတ်မိလျှက်သား ဖြစ်သွားရသည်။ သို့သော် သေဆုံးသူ ၇-ဦး၊ ကူးစက်ခံရသူ ၃၆၀ ကျော်မျှကို လျှော့တွက်မိခဲ့သည့်အတွက် လူဦးရေ ၁.၃ ဘီလျံနေထိုင်ရာ အိန္ဒိယတွင် စမ်းသပ်မှုများ တိုးချဲ့မည်ဖြစ်သည်။
ယခုရက်သတ္တပတ်မှစတင်ကာ မဖြစ်မနေ ရုံးတက်ရမည့်သူများမှလွဲလျှင် နယူးဒေလီရှိ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအနက် မုချလိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်လျှင် နေအိမ်မှသာ အလုပ်လုပ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများစုသည်လည်း ရပ်တန့်သွားမည်။
အနီးအနားရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်မှု ကူးစက်ခံရမှု့ ၂၇ မှုသာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၂- ဦး ရှိသည်။ သီရိလင်္ကာ၌ သေဆုံးသူ မရှိသော်လည်း ရောဂါပိုးကူးစက်လျှက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုခံရသူ ၈၂-ဦးရှိနေသည်။ နိုင်ငံ့မြောက်ပိုင်းအကျဉ်းထောင်မှ ဝန်ထမ်းများ ထွက်ပြေးခြင်း၊ ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းကြောင့် ထောင်ဆူပူမှု ဖြစ်ပွားရာ ၂-ဦး သေဆုံးပြီး ၆-ဦး ဒါဏ်ရာရရှိသည်။ ထိုအတွက် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အပြင်မထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယခုအခါ အာရှအစိုးရ အာဏာပိုင်များသည် ကူးစက်ကပ်ရောဂါကျရောက်မှု့ ဒုတိယလှိုင်းတွင်ပါဝင်သည့် ပြည်ပမှပြန်လည်ဝင်ရောက်သူများထံမှ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြရသည်။
((( Yahoo News., Mar. 23, 2020, Asia steps up virus efforts as second wave of infections strikes. By; Allison JACKSON” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲ ကူးစက်ကပ်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ ထူးခြားသတင်း ကောက်နှုတ်ချက်အကျဉ်း
Next Next post: ကိုဗစ်-နိုင်တင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စွဲ ကူးစက်ကပ်ရောဂါ လျှင်မြန်စွာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိ။ ကမ္ဘာအဝှမ်း တစ်ရက်အတွင်း လူပေါင်း ၂-သောင်း ၃-ထောင်ကျော်ထပ်မံကူးစက်ခံရ